Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Sacroilitis [Torolàlana tsara] - Vondt.net
14 / 10 / 2020 /i Hip, rheumatism /av loza
Ny teny hoe sacroilitis dia ampiasaina hilazana ireo karazana fivontosana rehetra izay mitranga ao amin'ny sendika iliosacral. Ho an'ny maro fantatra amin'ny hoe aretina mamaivay pelvika.
Ny tonon-taolana iliosacral dia tonon-taolana izay hita amin'ny lafiny roa amin'ny tetezamita lumbosacral (ao amin'ny hazondamosina ambany), ary mifandray amin'ny valahana. Izy ireo, amin'ny fomba tsotra, ny fifandraisana misy eo amin'ny sakramenta sy ny valahana. Amin'ity torolàlana ity dia hianaranao bebe kokoa momba io aretina io, soritr'aretina klasika, diagnostika ary, tsy kely indrindra, ny fomba fitsaboana azy io.
Soso-kevitra tsara: Eo amin'ny faran'ny lahatsoratra dia hahita horonan-tsary fanaovana fanatanjahan-tena maimaimpoana ianao miaraka amin'ireo fanazaran-tena ho an'ireo izay mijaly noho ny fanaintainan'ny valahana sy ny valahana.
Anatomy: Aiza ary inona ireo Iliosacral Joints?
Fitarihan-kevitra: Inona no atao hoe Sacroilitis?
Fambara an'ny Sacroilitis
Ny antony mahatonga ny Sacroilitis
Fanatanjahan-tena sy fanofanana amin'ny Sacroilitis (misy VIDEO)
Anatomy: Aiza ireo Joint Iliosacral?
Anatomy pelvika - Sary: Wikimedia
Ao amin'ny sary etsy ambony, nalaina avy tao amin'ny Wikimedia, dia mahita topy anatomika momba ny valahana, ny sakramenta ary ny coccyx isika. Araka ny hitanao dia ny ilium, pubis ary ischium ny taolana. Izy io dia ny fifandraisana misy eo amin'ny ilium sy ny sakramenta izay manome ny fototry ny fiarahan'ny iliosacral, izany hoe ny faritra ihaonan'izy roa. Misy iray eo ankavia ary iray eo ankavanana. Izy ireo koa dia matetika antsoina hoe ny tonon-taolana.
Inona no atao hoe Sacroilitis?
Ny sakroilitis dia matetika no hita ho anisan'ny soritr'aretin'ny toe-javatra rheumatic mamaivay maro ao amin'ny hazondamosiko. Ireo aretina sy fepetra ireo dia voakambana ho "spondyloarthropathy", ary ao anatin'izany ny aretina sy ny diagnostika rheumatic toy ny:
Sacroilitis dia mety ho ampahany amin'ny vanin-taolana mifandray amin'ny toe-javatra isan-karazany toy ny ulcerative colitis, ny aretina Crohn na osteoarthritis amin'ny tonon-taolana. Sacroilitis dia teny iray ihany koa izay indraindray ampiasaina amin'ny fifandimbiasan'ny hoe sacroiliac mifandray amin'ny tsy fetezana iraisana, satria ireo teny roa ireo dia azo ampiasaina amin'ny fomba ara-teknika hilazana ny fanaintainana izay avy amin'ny sacroiliac joint (na SI joint).
Ny ankamaroan'ny olona voan'ny sacroilitis dia mitaraina noho ny fanaintainan'ny lamosina ambany, ny valahana ary / na ny fitombenako (1). Mampiavaka azy ireo, matetika izy ireo no hilaza fa ny fanaintainana dia miorina amin'ny "taolana iray na roa amin'ny lafiny roa amin'ny vodin-damosina ambany" (anatomika fantatra amin'ny anarana hoe PSIS - ampahany amin'ny tonon-taolana iliosacral). Eto dia ilaina ny manamarika fa ny fihetsika sy ny faneriterena ny tonon-taolana izay miteraka fanaintainana mihombo. Ankoatr'izay, ny fanaintainana dia azo faritana matetika toy ny:
Taratra vitsivitsy avy any aoriana ary mankany amin'ny seza
Fanaintainana mihombo rehefa mijoro maharitra mandritra ny fotoana maharitra
Fanaintainana eo an-toerana noho ny tonon-taolana
Mihidy ao anaty valahana sy miverina
Fanaintainana rehefa mandeha
Maharary ny mifoha amin'ny fipetrahana amin'ny toerana mijoro
Maharary ny manangana ny tongotra amin'ny toerana ipetrahana
Ity karazana fanaintainana ity dia matetika antsoina hoe "fanaintainana axial". Midika izany ny fanaintainana biomekanika izay voafaritra voalohany amin'ny faritra iray - tsy misy taratra na inona na inona manokana ny tongotra na ny lamosina. Miaraka amin'izany voalaza izany, ny fanaintainan'ny pelvika dia afaka manondro fanaintainana hatrany amin'ny feny, saingy saika tsy nihoatra ny lohalika mihitsy.
Mba hahatakarana ny fanaintainana, dia tsy maintsy takatsika ihany koa ny ataon'ny valanoranony. Mamindra entana mavesatra avy any amin'ny tendrony ambany (tongotra) izy ireo hatrany ambony vatany - ary ny mifamadika amin'izany.
Sacroilitis: fitambaran'ny fanaintainan'ny pelvika sy ny soritr'aretina hafa
Ny fambara matetika amin'ny sacroilitis dia matetika mitambatra amin'ireto:
Fanaviana (ambaratonga ambany, ary amin'ny tranga maro dia saika tsy takatra akory)
Marary lamosina sy lamosina
Episodika dia nanondro ny fanaintainana hatramin'ny vodin-tongotra sy ny feny
Fanaintainana izay miharatsy rehefa mipetraka mandritra ny fotoana maharitra na mihodina eo am-pandriana
Ny hamafin'ny feny sy ny lamosina ambany, indrindra rehefa nifoha maraina na rehefa nipetraka elaela
Sacroilitis mifanohitra amin'ny vavonin'ny pelvika (tsy fahombiazan'ny Iliosacral Joint)
Sacroilitis dia teny iray ihany koa izay ampiasaina indraindray mifandimby amin'ny voambolana pelvic lock, satria ny teny roa dia azo ampiasaina ara-teknika hilazana ny fanaintainana izay avy amin'ny sendika iliosacral. Ny sacroilitis sy ny fikatonan'ny pelvika dia antony mahazatra amin'ny fanaintainana ambany, faritra iliosacral ary fanolorana ny vody sy ny feny.
Saingy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ireo fepetra roa ireo:
Amin'ny fitsaboana klinika, ny teny hoe "-it" dia ampiasaina ho firesahana amin'ny fivontosana, ary ny sacroilitis dia mamaritra ny fivontosana izay mitranga ao amin'ny sendika iliosacral. Ny fivontosana dia mety vokatry ny tsy fetezana eo amin'ny tonon-taolana na misy antony hafa voalaza etsy aloha ao amin'ny lahatsoratra (ohatra noho ny rheumatisme).
Misy antony maro samihafa amin'ny sacroilitis. Ny Sacroilitis dia mety vokatry ny olana voajanahary amin'ny valahana sy ny valahana - amin'ny teny hafa raha misy tsy fetezana eo amin'ny tonon-taolana na raha simbaina ny fivezivezin'ny vatan-kazo. Mazava ho azy, ny fivontosana dia mety vokatry ny mekanika miova ao amin'ny tonon-taolana izay manodidina ny tonon-taolana iliosacral koa - ohatra, ny fihaonan'ny lumbosacral. Ny antony mahazatra indrindra amin'ny sacroilitis dia izao:
Osteoartritis amin'ny tonon-taolana
Tsy fahombiazan'ny mekanika (Pelvic Lock na Pelvic Loose)
Ratra sy lozam-pifamoivoizana (mety hiteraka fivontosana vetivety amin'ny tonon-taolana)
Ireo antony mampidi-doza amin'ny Sacroilitis
Antony maro samihafa no mety hiteraka sacroilitis na hampitombo ny mety fitrangan'ny sacroilitis:
Ny karazana spondyloarthropathy, izay misy ankylosing spondylitis, aretin-tratra mifandray amin'ny psoriasis ary aretina rheumatolojika hafa toy ny lupus.
Ny aretin-tratra degenerative na osteoarthritis an'ny hazondamosina (osteoarthritis), izay mitarika ho amin'ny fahatapahana ny tonon-taolana iliosacral izay mivadika ho fivontosana sy fanaintainan'ny tonon-taolana.
Ratra mahazo ny lamosina, ny valahany na ny vodiny, toy ny lozam-pifamoivoizana na ny fahalavoana.
Ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana vokatry ny valan-tratra lasa nivelatra ary nanitatra ireo lalan-drà sacroiliac rehefa teraka (vahaolana pelvika).
Ny aretin'ny tonon-taolana iliosacral
Fampiasana fanafody intravena
Raha marary ny valahana amin'ny marary ary manana ny iray amin'ireo aretina etsy ambony ireo dia mety hanondro sacroilitis izany.
Ny fitsaboana ny sacroilitis dia ho faritana arakaraka ny karazany sy ny hamafin'ny soritr'aretin'ny marary ary ny antony mahatonga ny sacroilitis. Ny drafitry ny fitsaboana dia mifanaraka amin'ny marary tsirairay. Ohatra, ny spondylitis ankylosing (ankylosing spondylitis) dia mety ho aretina mitambatra amin'ny lozam-pifamoivoizana, ary avy eo ny fitsaboana dia tsy maintsy ampifanarahana mifanaraka amin'izany. Ny fitsaboana ara-batana dia matetika ataon'ny mpitsabo ara-pahasalamana eken'ny besinimaro (ao anatin'izany ny MT) na ny mpitsabo. Ny fitsaboana ara-batana dia misy vokany voarakitra an-tsoratra tsara amin'ny fanaintainan'ny pelvika, ny asymmetrika amin'ny pelvika ary ny tsy fahombiazan'ny faritra pelvika (2).
Sacroilitis mazàna dia misy fihetsika mamaivay sy tsy fahombiazan'ny mekanika. Noho izany, ny fitsaboana dia mazàna koa dia misy fanafody anti-inflammatoire sy fitsaboana ara-batana. Tianay ny mahita ny fitambaran'ireto manaraka fitsaboana ny sacroilitis sy ny fanaintainan'ny valahana:
Fanafody anti-inflammatoire (anti-inflammatoire) - avy amin'ny dokotera
Fitsaboana ara-batana ho an'ny hozatra sy hozatra (mpitsabo aretin-tsaina sy mpitsabo aretin-tsaina ankehitriny)
Fitsaboana iraisana amin'ny fikatonan'ny pelvika (fanentanana miaraka amin'ny kiropraktika)
Fanatanjahan-tena sy fampiofanana an-trano manokana
Amin'ny tranga tena henjana dia mety ny fampidirana kortisone
Soso-kevitra: Ny fanovana ny toerana fatorianao dia afaka manampy amin'ny fanamaivanana ny fanaintainana rehefa matory ianao ary rehefa mifoha. Ny ankamaroan'ny marary dia mahita fa tsara kokoa ny matory amin'ny sisiny miaraka amin'ny ondana apetraka eo anelanelan'ny tongony mba hitazomana ny valahany. Ny hafa koa dia mitatitra vokatra tsara amin'ny fampiharana sakafo fanoherana ny inflammatoire.
Fitsaboana kiropraktika ho an'ny Sacroilitis
Ho an'ireo marary voan'ny aretin-tratra dia azo ampiasaina ny fomba fitsaboana kiropraktika isan-karazany, ary matetika izy ireo no heverina ho dingana voalohany amin'ny fizotran'ny fitsaboana - miaraka amin'ny fanazaran-tena ao an-trano. Ilay mpitsabo aretin-tsaina maoderina dia hanao fanadinana miasa tanteraka aloha. Hanontany momba ny tantaram-pahasalamanao izy avy eo, ankoatry ny zavatra hafa hahitana raha misy aretina miara-miaina na tsy fetezan'ny mekanika hafa.
Ny tanjon'ny fitsaboana kiropraktika amin'ny fanaintainan'ny pelvika dia ny fampiasana fomba izay mahazaka olona indrindra, ary manome ny vokatra farany azo trandrahana. Ny marary dia mamaly tsara kokoa amin'ny fomba samihafa, noho izany ny kiropractika dia mety hampiasa teknika maro samihafa hitsaboana ny fanaintainan'ny marary.
Kiropraktika maoderina mitsabo hozatra sy hozatra
Eto dia zava-dehibe ny manamarika fa ny mpitsabo kiropraktika maoderina dia manana fitaovana marobe ao amin'ny boaty fitaovany, ary izy ireo dia mitsabo miaraka amin'ny teknikan'ny hozatra sy ny fanitsiana iraisana. Ankoatr'izay, ity vondrona asa ity matetika dia manana fahaizana tsara amin'ny fitsaboana ny onja amin'ny tsindry sy ny fanjaitra. Farafaharatsiny izany no izy ny toeram-pitsaboana mpiara-miasa aminay. Ny fomba fitsaboana ampiasaina dia te hampiditra:
Fanentanana iraisana sy fanodinkodinana iraisana
Teknolojia fanorana sy hozatra
Fitsaboana tady (fihenan'ny tsindrona)
Hiteraka teboka fitsaboana
Raha ny mahazatra, amin'ny olana eo amin'ny pelvika, ny fitsaboana iraisana, ny fitsaboana ny hozatra ary ny teknika fanamafisana dia zava-dehibe.
Fanodinkodinana iraisana amin'ny fanaintainan'ny valahana
Misy teknika fanodikodinam-bokatra roa ankapobeny ho an'ny olan'ny tonon-taolana:
Ny fanitsiana kiropractika nentim-paharazana, antsoina koa hoe fanodikodinana iraisana na HVLA, dia manome tosika haingana sy hery ambany.
Ny fanitsiana milamina / kely dia antsoina koa hoe fanentanana miaraka; atsofoka amin'ny hafainganam-pandeha ambany sy hery ambany.
Ny fandrosoana amin'ity karazana fanitsiana ity matetika dia mitarika famoahana heno antsoina cavitation, izay mitranga rehefa afa-mandositra ny oksizena, ny azota ary ny dioksidan'ny karbaona, izay nanintona azy nihoatra ny fivezivezena mandehandeha ao anatin'ny faritry ny sela. Ity fikafika kiropraktika ity dia mamorona "feo mamaky" mahazatra izay matetika mifandraika amin'ny fanodikodinam-piaraha-miasa ary toa izany rehefa "mamaky ny taolana" ianao.
Na dia mety manome fiheverana aza ity famaritana "mitresaka" amin'ny fanodikodinana kiropraktika ity fa tsy mahazo aina izany, dia tena manafaka ny fahatsapana, indraindray saika eo noho eo. Ny mpitsabo dia maniry ny hanambatra fomba fitsaboana maro mba hisy ny vokatra tsara indrindra amin'ny sary sy fiasan'ny marary.
Fomba fanentanana iraisana
Ny fomba fanentanana miaraka tsy dia matanjaka loatra dia mampiasa teknika haingam-pandeha izay mamela ny mpiray hijanona ao anatin'ny haavon'ny fivezivezena tsotra. Teknika kiropraktika malefaka kokoa no ahitana:
Teknika "mitete" amin'ny dabilio mpitsabo manokana: Ity dabilio ity dia misy fizarana maromaro azo ahodina ary avy eo ampidinina miaraka amin'izay aorian'ny fandosiran'ny mpitsabo, izay mamela ny hery misintona handray anjara amin'ny fanitsiana iraisana.
Fitaovana fanitsiana manokana antsoina hoe Activator: Ny activator dia fitaovana entina lohataona ampiasaina mandritra ny fizotran'ny fanitsiana mba hamoronana tosika ambany tsindry amin'ireo faritra manokana manamorona ny hazondamosina.
Teknika "fanelingelenana flexion": Ny fanelingelenana flexion dia mitaky fampiasana latabatra natao manokana izay manitatra moramora ny hazondamosina. Ny mpitsabo aretin-tsaina dia afaka manoka ny faritra misy fanaintainana raha miondrika amin'ny hetsiky ny pumping ny hazondamosina.
Raha afohezina: Ny sacroilitis dia matetika tsaboina amin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny zava-mahadomelina manohitra ny inflammatoire sy ny fitsaboana ara-batana.
Mijaly amin'ny fanaintainana lava lava ve ianao?
Fanatanjahan-tena sy fanofanana miady amin'ny Sacroilitis
Ny programa fanatanjahan-tena miaraka amin'ny fampihetseham-batana, ny tanjaka ary ny fiofanana kardio aerobika dia matetika ampahany lehibe amin'ny ankamaroan'ny regimensan'ny fitsaboana ampiasaina amin'ny sacroilitis na fanaintainan'ny valahana. Ny fanazaran-tena any an-trano dia azo tendren'ny mpitsabo aretin-tsaina, mpitsabo kiropractika na manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamana mifandray amin'izany.
Amin'ity horonantsary eto ambany ity dia mampiseho fanazaran-tena mihetsiketsika 4 ho an'ny sindrom-piriformis ianao. Toe-javatra iray izay misy ny hozatra piriformis, miaraka amina tonon-taolana, mametraka tsindry sy fahasosorana amin'ny hozatra sciatic. Ireo fanazaran-tena ireo dia misy ifandraisany indrindra aminao izay mijaly noho ny fanaintainan'ny valahana, satria manampy amin'ny famahana ny seza izy ireo ary manome fihetsiketsehana pelvika tsara kokoa.
1. Slobodin et al, 2016. «sacroiliitis maharary». Rheumatology klinika. 35 (4): 851–856.
2. Alayat et al. 2017. Ny fahombiazan'ny fitsaboana amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny tsy fahampian'ny fiaraha-miasa sacroiliac: famerenana rafitra. J Phys Ther Sci. 2017 Sep; 29 (9): 1689-1694.
https://www.vondt.net/wp-content/uploads/sakroilitt-coverbilde.jpg 368 700 loza https://www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png loza2020-10-14 16:30:542021-03-24 10:47:28Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Sacroilitis [Torolàlana tsara]
Autoimmune arthritis Fibromyalgia sy Plantar Fascitis